Yintoni i-html6? | Abadali be-Intanethi
UMary Rose | | ngokubanzi
I-HTML yavela kwi-90s, iye yavela de yafikelela kwi-HTML5 version, into esiyaziyo namhlanje. Njengamaphepha ewebhu, ulwimi lwabo luyaguquka, ngoko ke uhlaziyo luyafuneka ukuze uphuhliso lwewebhu lusebenze ngakumbi kwaye lube manzi. Le yinto ofuna ukuyiphumeza ngoguqulelo lwamva nje lweHTML5, eyaziwa ngcono njengeHTML6. Nangona umhla wokukhutshwa kwimarike awukaziwa, ezinye iinguqu ezinokwenzeka ziyaziwa kwaye zi-intuited.
Kwiposi namhlanje sikuxelela malunga nokuba yintoni iHTML6, iimpawu eziza kubonisa, iimfuno eziyimfuneko zokukwazi ukuzisebenzisa kunye notshintsho oluyaziwayo ngoku, nangona lunokutshintsha kude kube ngokulandelayo.
1 Yintoni i-HTML6?
1.1 Iimpawu zeHTML6
1.2 Iimfuno zeHTML6
I-HTML (uLwimi lwe-HyperTextMarkup) okanye eyaziwa ngokuba lulwimi lwe-hypertext, ibhekisa kulwimi lophawulo kulwazi lwamaphepha ewebhu. Yintoni eyenziwa ngolu lwimi ichaza isakhiwo esisisiseko kunye nekhowudi (HTML), ukuchaza imixholo yephepha lewebhu njengemibhalo, imifanekiso, phakathi kwabanye. Zonke iibhrawuza zisebenzisa le modeli njengolwimi lokubonisa amaphepha ewebhu.
Ulwimi lwe-HTML lusekwe kulwahlulo. Ukuqonda kwakho, ukuba ufuna ukongeza into yangaphandle kwiphepha lewebhu, kuyimfuneko ukwenza ireferensi kwindawo yento ethethiweyo ngokubhaliweyo. Ngaloo ndlela, isakhiwo sephepha lewebhu siya kuba nesicatshulwa kuphela. Njengoko kusemgangathweni, yintoni i-HTML ekhangele ngayo kukuba kungakhathaliseki ukuba isiphequluli, naliphi na iphepha lewebhu linokuguqulelwa nayiphi na isiphequluli.
Ngo-2014, i-HTML5, ngoku enye yezona teknoloji zaziwa kakhulu zewebhu, zeza kwimarike. Kodwa ukusukela ngoko akukho hlaziyo lufikileyo de kwaziwa ukuba i-HTML6 iza kukhutshwa kungekudala kwimarike. Ngoko ke, I-HTML6 iyakuba yinguqulelo ehlaziyiweyo ye-HTML5. Ngokukodwa, iya kuba neempawu eziphucukileyo ezakhiwe kwisiseko sokhuseleko okanye ukubonakaliswa kweelebhile, phakathi kwabanye.
Ukuhambelana: iyahambelana neenguqulelo zayo zangaphambili. Oku kungenxa ye-OOXML (i-Ofisi evulekileyo ye-XML) eya kujongana nenxalenye yolandelelwano.
Uyilo: Le nguqulo intsha inokuxhasa i-HTML CSS4, eya kwenza uyilo lomzobo wephepha lewebhu lube nomtsalane ngakumbi.
Ukufuduka okulula: ababhekisi phambili baya kuba nakho ukufaka amaxwebhu abo amadala ukusuka kwi-HTML4 ukuya kwi-HTML6 nangokuphambana.
Isintakisi: I-HTML6 iqhelekile ngokwemigangatho ye-syntax inokuchazwa malunga nemigca ye-10.
Uguqulelo lwamva nje lweHTML5 ifuna isikhangeli sewebhu sihlaziywe kuhlobo lwamva nje. Ewe, le nguqulo ibeka phambili ukhuseleko. Ukugcina isikhangeli sakho sihlaziyiwe kuya kunceda olu lwimi lugcine zonke iifitsha ezihambelanayo. Nokuba yeyiphi na isikhangeli osisebenzisayo, nokuba yiFirefox, iChrome, iOpera, iSafari okanye nayiphi na enye oyaziyo, kuya kufuneka uyigcine isexesheni ukuze unike eyona ntsebenzo ilungileyo kwiHTML6.
Ezi zezinye zeempawu eziya kuba nazo i-HTML6, ekubeni ingekakhululwa, kunokubakho utshintsho de ikhutshwe kamva.
Udibaniso lweKhamera: I-HTML6 ifaka ifoto okanye ividiyo yokufota, ikwenza kube lula kubasebenzisi ukufikelela kwiifoto kunye nokugcinwa kwekhompyuter kulawulo olungcono lwekhamera kunye namazinga angcono okubona.
Isiqinisekiso: Abakhangeli kufuneka ngoko nangoko banike ubunyani obuqinileyo xa befikelela kwiinguqulelo ezintsha zeHTML. Kuphela ngokuqinisekisa ukuthembeka kwesoftware unokuphucula ngokwenene ukusebenza kwewebhusayithi kunye nesikhangeli.
Ithala leencwadi: Uninzi lwewebhusayithi zisebenzisa iilayibrari ze-JS ezifihliweyo, ukuze kukhawuleziswe inkqubo yophuhliso lwesicelo sewebhu.
Imiyalelo: Olunye utshintsho olulindelekileyo lumalunga nokuhanjiswa kwesakhiwo sevidiyo kwiphepha lewebhu.
Amagama: Njengoko sele sichazile ngaphambili, isakhiwo se-HTML sidinga isichasiselo esithile ngokwemiqathango yamagama, amabinzana kunye nemihlathi.
iifomati ezincinci: iithegi eziqhelekileyo ziya kuphuculwa, njengoko ezi zenza umgangatho wamaphepha ewebhu ubengcono. Abaphuhlisi bewebhu banokuchaza imihla, iindawo ezineHTML6.
Ukuhambelana komfanekiso: Phakathi kweetheminali ezahlukeneyo, ubungakanani bepixel buya kutshintsha. Olu hlaziyo luphuculweyo luya kukwazi ukubonisa ubungakanani bemifanekiso kunye nokulungisa umba wefoto.
I-HTML6 ayikahlaziyo lokwenyani kwi-HTML5, ke olu tshintsho kunye neemfuno azizokugqibela, Nangona olunye uhlaziyo lwazisiwe, olunye utshintsho luqikelelo nje malunga nokuba inguqulelo entsha ye-HTML5 ingaba yintoni.
Okwangoku, ndikushiya ikhonkco kwenye iposi malunga iitemplates zeHTML5 kunye neCSS3 ngoko unokuqhubeka uziqhelanisa kude kuphume uguqulelo lwamva nje. Ndiyathemba ukuba esi sithuba sibe luncedo kuwe kwaye ukwazile ukuqonda ngcono kancinci ukuba yintoni i-HTML6.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni i-html6?
Yintoni uyilo lwegraphic?